Ulongamo LukaThixo—Ukupheliswa Kokungabikho Kokusesikweni | Sondela
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBaoule IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgesi IsiNiuea IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUruund IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
1. Sisenokusabela njani kwizenzo zokungekho sikweni?
UMHLOLOKAZI owalupheleyo uyaqhathwa aze aphulukane nemali yakhe abezigcinele yona ubomi bakhe bonke. Usana olungenakuzinceda lulahlwa ngumzali ongakhathaliyo. Indoda ethile ibanjelwa ulwaphulo-mthetho engalwenzanga. Uvakalelwa njani zezi ziganeko? Kusenokwenzeka ukuba, ngasinye sazo siyakukhathaza, yaye kuyaqondakala oko. Thina bantu sikhawuleza siyibone into elungileyo nephosakeleyo. Xa kusenziwa okungekho sikweni, siyacaphuka. Sifuna ukuba lowo ulixhoba abuyiselwe izinto zakhe, yena umenzi-bubi ohlwaywe. Xa kungenzeki oku, sisenokuzibuza: ‘Ngaba uThixo uyakubona oku kwenzekayo? Kutheni engenzi nto ngako?’
2. Wavakalelwa njani uHabhakuki kukungabikho kokusesikweni, yaye kutheni uYehova engazange amgxeke ngako oko?
2 Ukutyhubela imbali, abakhonzi abathembekileyo bakaYehova baye babuza imibuzo efanayo. Ngokomzekelo, umprofeti uHabhakuki wathandaza wathi kuThixo: “Kutheni undenza ndibone okungekho sikweni okulolu hlobo? Kutheni uvumela ugonyamelo, ubungendawo, ulwaphulo-mthetho nenkohlakalo ukuba zande kuyo yonk’ indawo?” (Habhakuki 1:3, Contemporary English Version) UYehova akazange amgxeke uHabhakuki ngokuthetha kwakhe ngokuphandle, kuba Nguye owafaka ebantwini ingcamango yokusesikweni. Ewe, uYehova usisikelele ngokusinika umlinganiselo omncinane wengcamango yakhe ebalaseleyo yokusesikweni.
UYehova Ukuthiyile Okungekho Sikweni
3. Kutheni kunokuthiwa uYehova ukuqonda ngaphezu kwethu okungekho sikweni okukhoyo?
3 UYehova akakubethi ngoyaba okungekho sikweni. Uyakubona oko kwenzekayo. Ngokuphathelele imihla kaNowa, iBhayibhile isixelela ukuba: “UYehova wabona ukuba ububi bomntu bandile emhlabeni yaye zonke iingcamango zentliziyo yakhe zityekele ebubini ngalo lonke ixesha.” (Genesis 6:5) Khawucingisise nje ngentsingiselo yaloo mazwi. Ngokufuthi, ingcamango yethu ngokungekho sikweni isekelwe kwiziganeko ezimbalwa esiye seva ngazo okanye sahlangabezana nazo ngokobuqu. Ngokwahlukileyo koko, uYehova uyakwazi okungekho sikweni okwenziwa emhlabeni wonke. Uyakubona konke! Ngaphezu koko, uyaziqonda iingcamango zentliziyo—iingcamango ezimbi eziphembelela izenzo zokungekho sikweni.—Yeremiya 17:10.
4, 5. (a) IBhayibhile ibonisa njani ukuba uYehova unenkxalabo ngabo baye baphathwa ngokungekho sikweni? (b) Yena ngokwakhe uYehova uye wachaphazeleka njani kokungekho sikweni?
4 Kodwa uYehova wenza okungakumbi kunokukuphawula nje kuphela okungekho sikweni. Kwakhona unenkxalabo ngabo baye baba ngamaxhoba. Xa abantu bakhe baphathwa ngenkohlakalo ziintlanga ezinobutshaba, uYehova wabandezeleka “ngokugcuma kwabo ngenxa yabacinezeli babo nabo babebatyhalatyhala.” (ABagwebi 2:18) Mhlawumbi uye waphawula ukuba okukhona abanye abantu bekubona okungekho sikweni, kokukhona bengakukhathaleli. Akunjalo ngoYehova! Ukubonile konke okungekho sikweni kangangama-6 000 eminyaka, ukanti akayekanga ukukuthiya. Kunoko, iBhayibhile isiqinisekisa ukuba izinto ‘ezinjengolwimi oluxokayo, izandla eziphalaza igazi elimsulwa, nengqina elixokayo elifutha ubuxoki,’ ziyacekiseka kuye.—IMizekeliso 6:16-19.
5 Kwakhona, khawucinge ngokuzigxeka kukaYehova ngokungqongqo iinkokeli ezazisenza ngokungekho sikweni kwaSirayeli. Waphefumlela umprofeti wakhe ukuba azibuze athi: “Asikokwenu na ukwazi okusesikweni?” Emva kokukuchaza ngokucacileyo ukulisebenzisa kwawo kakubi igunya, uYehova waxela kwangaphambili oko kwakuza kwenzeka kula madoda onakeleyo, esithi: “Baya kumemeza kuYehova becela uncedo, kodwa akayi kubaphendula. Uya kubufihla ubuso bakhe kubo ngelo xesha, ngenxa yobubi ababenzileyo.” (Mika 3:1-4) Hayi indlela uYehova akuthiye ngayo okungekho sikweni! Kaloku, naye wakha waba lixhoba lako! Kangangamawaka eminyaka, uSathana uye wamgculela ngokungekho sikweni. (IMizekeliso 27:11) Ngaphezu koko, uYehova wakhe wachaphazeleka kwesona senzo sonyanyekayo sokungekho sikweni xa uNyana wakhe, ‘ongazange enze sono,’ wabulawa njengesaphuli-mthetho. (1 Petros 2:22; Isaya 53:9) Ngokucacileyo, uYehova akakubethi ngoyaba okanye angakuhoyi ukubandezeleka kwabo bangamaxhoba okungekho sikweni.
6. Sisenokusabela njani xa sijamelana nokungekho sikweni, yaye ngoba?
6 Ngenxa yoko, xa sibona okungekho sikweni—okanye xa thina ngokwethu sisiba ngamaxhoba okuphathwa ngokungekho sikweni—ngokwemvelo sicaphuka gqitha. Senziwe ngokomfanekiso kaThixo, yaye okungekho sikweni kuchasene ngokupheleleyo nako konke oko uYehova akumeleyo. (Genesis 1:27) Ngoko, kutheni uThixo ekuvumela okungekho sikweni?
Imbambano Yolongamo LukaThixo
7. Chaza indlela olwacelwa umngeni ngayo ulongamo lukaYehova.
7 Impendulo yalo mbuzo inokuthanani nembambano yolongamo. Njengoko sibonile, uMdali unelungelo lokulawula umhlaba nabo bonke abo bahlala kuwo. (INdumiso 24:1; ISityhilelo 4:11) Noko ke, ekuqaleni kwembali yabantu ulongamo lukaYehova lwacelw’ umngeni. Kwenzeka njani oku? UYehova wayalela umntu wokuqala, uAdam, ukuba angatyi kumthi othile owawusemyezweni owawulikhaya lakhe eliyiParadesi. Yaye kuthekani ukuba wayengathobeli? UThixo wathi kuye: “Uya kufa ngokuqinisekileyo.” (Genesis 2:17) Lo myalelo kaThixo wawungeloxanduva kuAdam okanye umfazi wakhe, uEva. Noko ke, uSathana woyisela uEva ekucingeni ukuba uThixo wayengqongqo ngokungafanelekanga. Yintoni eyayiza kwenzeka ukuba wayesitya kuloo mthi? USathana wamxelela ngokuphandle uEva ukuba: “Ngokuqinisekileyo anisayi kufa. Kuba uThixo uyazi ukuba mhla nithe nadla kuzo aya kuvuleka amehlo enu nize nibe njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi.”—Genesis 3:1-5.
8. (a) Yiyiphi ingcamango eyadluliselwa ngamazwi kaSathana kuEva? (b) Yintoni awayicela umngeni uSathana ngokuphathelele ulongamo lukaThixo?
8 Kula mazwi uSathana wayedlulisela ingcamango yokuba uYehova wayengamvimbanga nje kuphela inkcazelo ebalulekileyo uEva kodwa kwakhona wayemxokisile. USathana wayekulumkele ukuthandabuza isibakala sokuba uThixo ungumongami. Kodwa wakucel’ umngeni ukufaneleka, ukuba yimfuneko nokulunga kolongamo lwakhe. Ngamany’ amazwi, wayesithi uYehova wayengalusebenzisi ulongamo Lwakhe ngendlela yobulungisa ukuze anelise izilangazelelo zabantu Bakhe.
9. (a) Waba yintoni umphumo wokungathobeli kuka-Adam noEva, yaye oku kwaphakamisa yiphi imibuzo ebalulekileyo? (b) Kutheni uYehova engazange asuke nje abatshabalalise abo bavukeli?
9 Ngenxa yoko, bobabini uAdam noEva abazange bamthobele uYehova ngokuthi batye kumthi owalelweyo. Ukungathobeli kwabo kwabazisela isohlwayo sokufa, kanye njengokuba uThixo wayebayalele. Ubuxoki bukaSathana baphakamisa imibuzo ebalulekileyo. Ngaba ngokwenene uYehova unelungelo lokulawula uluntu, okanye ngaba umntu ufanele azilawule? Ngaba uYehova ulusebenzisa ulongamo lwakhe ngeyona ndlela ifanelekileyo? UYehova wayenokusebenzisa amandla akhe njengosomandla ukubatshabalalisa ngoko nangoko abo bavukeli. Kodwa ucelomngeni lwaluphathelele ulawulo lukaThixo, kungekhona amandla akhe. Ngoko ukutshabalalisa uAdam, uEva noSathana kwakungayi kungqina ukulunga kolawulo lukaThixo. Kunoko, kwakuya kulwenza luthandabuzeke nangakumbi ulawulo lwakhe. Ekuphela kwendlela yokubona enoba abantu babenako kusini na ukuzilawula, ngaphandle kukaThixo, yayikukubanika ixesha elingakumbi.
10. Yintoni etyhilwe yimbali ngokuphathelele ulawulo lomntu?
10 Yintoni eyatyhilwa kukuhamba kwexesha? Ebudeni beenkulungwane, abantu baye bazama iindidi ezininzi zoorhulumente, kuquka ulawulo lobuzwilakhe, olwedemokhrasi, olobusoshiyali nolobukomanisi. Xa bebonke nje aba rhulumente babotshwa ngabande linye ngala mazwi angqalileyo eBhayibhile athi: “Ngexesha athi umntu alawule umntu iba kukwenzakala kwakhe.” (INtshumayeli 8:9) Ngokufanelekileyo, umprofeti uYeremiya wathi: “Ndazi kakuhle, Yehova, ukuba ayikho semntwini wasemhlabeni indlela yakhe. Asikokomntu ohambayo ukwalathisa inyathelo lakhe.”—Yeremiya 10:23.
11. Kwakutheni ukuze uYehova avumele abantu babandezeleke?
11 UYehova wayesazi kwasekuqaleni ukuba ukuzimela geqe koluntu, okanye ukuzilawula kwalo, kwakuza kuzisa ingcinezelo enkulu. Ngoko, ngaba kwakungekho sikweni ngaye ukuvumela le meko ukuba iqhubeke? Akunjalo konke konke! Singakuzekelisa ngolu hlobo oku: Masithi unomntwana ofanele atyandwe ukuze kusindiswe ubomi bakhe. Uyaqonda ukuba olu tyando luza kumenza abandezeleke kakhulu umntwana wakho, yaye oku kukwenza uzive ubuhlungu gqitha. Kwangaxeshanye, uyazi ukuba luza kumenza umntwana wakho anandiphe impilo entle kamva ebomini. Ngokufanayo, uThixo wayesazi—wada waxela kwangaphambili—ukuba ukuvumela kwakhe umntu azilawule kwakuza kubangela intlungu nokubandezeleka okukhulu. (Genesis 3:16-19) Kodwa wayesazi nokuba ukuvumela kwakhe ukuba lonke uluntu lubone iziqhamo ezibi eziveliswa yimvukelo kwakuya kuphumela kwisiqabu esihlala sihleli nesibalulekileyo. Ngale ndlela le mbambano yayinokuconjululwa ngonaphakade.
Imbambano Ephathelele Ingqibelelo Yabantu
12. Njengoko kuzekelisiwe kwimeko kaYobhi, sisiphi isimangalo asiphakamisileyo uSathana nxamnye nabantu?
12 Kukho enye inkalo yalo mbandela. Ekuceleni umngeni ukufaneleka nokulunga kolawulo lukaThixo, uSathana akaphelelanga nje ngokugculela uYehova ngokuphathelele ulongamo Lwakhe; ukwagculele nabakhonzi bakaThixo ngokuphathelele ingqibelelo yabo. Ngokomzekelo, khawuphawule oko wakuthethayo uSathana kuYehova ngokuphathelele indoda elilungisa uYobhi: “Ngaba wena akumbiyelanga yena nendlu yakhe nayo yonke into anayo macala onke? Umsebenzi wezandla zakhe uwusikelele, nemfuyo yakhe isasazeke ngokubanzi emhlabeni. Kodwa, ngokwahlukileyo koko, khawuncede wolule isandla sakho, uchukumise yonke into anayo uze ubone enoba akayi kukuqalekisa ebusweni bakho na.”—Yobhi 1:10, 11.
13. Yayiyintoni intsingiselo yezimangalo zikaSathana ngokuphathelele uYobhi, yaye oku kubabandakanya njani bonke abantu?
13 USathana wavelisa imbambano yokuba uYehova wayesebenzisa amandla Akhe akhuselayo ekuthengeni ingqibelelo kaYobhi. Ngamany’ amazwi, wayesithi ingqibelelo kaYobhi yayiyeyohanahaniso, wayemkhonza uThixo kuphela ngenxa yenzuzo awayeyifumana. USathana wema ngelithi ukuba uYobhi wayenokungasikelelwa nguThixo, wayeya kumqalekisa uMdali wakhe. USathana wayesazi ukuba uYobhi wayekhethekile ekubeni ‘ngongenakusoleka nothe tye, omoyikayo uThixo nophambukayo ebubini.’ * Ngoko ukuba uSathana wayenokuyaphula ingqibelelo kaYobhi, kwakuya kuthetha ntoni oko ngoluntu luphela? Ngoko eneneni uSathana wayecel’ umngeni ukunyaniseka kwabo bonke abo bafuna ukukhonza uThixo. Eneneni, lilonke uSathana wayesithi kuYehova: “Yonke into anayo umntu [kungekuphela nje uYobhi] uya kuyinikela ngenxa yomphefumlo wakhe.”—Yobhi 1:8; 2:4.
14. Yintoni eye yayibonisa imbali ngokuphathelele isimangalo sikaSathana nxamnye nabantu?
14 Imbali ibonisa ukuba abaninzi, njengoYobhi, baye bahlala benyanisekile kuYehova nangona babelingwa—nto leyo eluphikisayo ucelomngeni lukaSathana. Bayivuyisile intliziyo kaYehova ngokuthembeka kwabo, yaye oku kumenze uYehova wakwazi ukuluphendula ugculelo lukaSathana lokuba abantu baya kuyeka ukukhonza uThixo xa besiva ubunzima. (Hebhere 11:4-38) Ewe, abo bantliziyo zilungileyo baye bala ukumnikela umva uThixo. Kwanaxa bethwaxwa zezona meko zimaxongo, baye bakholosa ngakumbi ngoYehova ukuba abanike amandla okunyamezela.—2 Korinte 4:7-10.
15. Nguwuphi umbuzo osenokuphakama ngokuphathelele imigwebo kaThixo yexesha elidluleyo nelizayo?
15 Kodwa ukubonisa kukaYehova okusesikweni kubandakanya okungakumbi kunembambano yolongamo nengqibelelo yabantu. IBhayibhile isinika ingxelo yemigwebo kaYehova ngokuphathelele abantu ngabanye kwaneentlanga ziphela. Ikwaqulethe neziprofeto zemigwebo aza kuyiphumeza kwixesha elizayo. Kutheni sinokuba nentembelo yokuba uYehova uye wayiphumeza yaye useza kuyiphumeza ngobulungisa imigwebo yakhe?
Isizathu Sokuba Ukuba Sesikweni KukaThixo Kubalasele
UYehova akasayi kuze ‘alitshayele ilungisa kunye nongendawo’
16, 17. Nguwuphi umzekelo obonisa ukuba abantu banembono elinganiselweyo ngokuphathelele ukubonisa okusesikweni kokwenyaniso?
16 Ngokuphathelele uYehova, kunokutshiwo ngokuchanileyo ukuthi: “Zonke iindlela zakhe zisesikweni.” (Duteronomi 32:4) Akukho namnye kuthi onokuthetha oko ngaye siqu, kuba ngokufuthi iimbono zethu ezilinganiselweyo zisitha ingcamango yethu ngoko kulungileyo. Ngokomzekelo, khawucinge nje ngoAbraham. Wabongoza uYehova ngokuphathelele ukutshatyalaliswa kweSodom—phezu kwako nje ukubalasela kwaloo ndawo ngobungendawo. Wabuza wathi kuYehova: “Ngaba ngokwenene uya kulitshayela ilungisa kunye nongendawo kusini na?” (Genesis 18:23-33) Ngokuqinisekileyo, impendulo yathi hayi. Kuphela kwaba semva kokuba uLote olilungisa kunye neentombi zakhe befike ngokukhuselekileyo eTsoware awathi uYehova “wanisa isalfure nomlilo” phezu kweSodom. (Genesis 19:22-24) Ngokwahlukileyo koko, uYona “wavutha ngumsindo” xa uThixo wabonisa inceba kubantu baseNineve. Ekubeni uYona wayesele ekuvakalisile ukutshatyalaliswa kwabo, ebeya kwaneliseka kukubabona betshatyalaliswa—kungakhathaliseki ukuguquka kwabo ngokusuk’ entliziyweni.—Yona 3:10–4:1.
17 UYehova wamqinisekisa uAbraham ukuba ukubonakalisa Kwakhe okusesikweni kuquka kungekuphela nje ukutshabalalisa abangendawo kodwa kwanokusindisa abalungileyo. Kwelinye icala, uYona kwakufuneka efundile ukuba uYehova unenceba. Ukuba abangendawo bayazitshintsha iindlela zabo, “ukulungele ukuxolela.” (INdumiso 86:5) Ngokungafaniyo nabantu abanganqabisekanga, uYehova akawisi isigwebo esiqatha kuba nje efuna ukubonisa amandla akhe, okanye ayeke ukubonisa imfesane kuba nje esoyika ukujongwa njengobuthathaka. Usoloko ebonisa inceba nanini na kukho imfuneko yokwenjenjalo.—Isaya 55:7; Hezekile 18:23.
18. Bonisa ngokusuka eBhayibhileni ukuba uYehova akenzi nje ngokuqhutywa ziimvakalelo.
18 Noko ke, uYehova akamfanyekiswa ziimvakalelo nje kuphela. Xa abantu bakhe babandakanyeka ngokunzulu kunqulo-zithixo, uYehova wathi: “[Ndiya kukugweba] ngokweendlela zakho ndize ndizizise kuwe zonke izinto zakho ezicekisekayo. Kwaye iliso lam aliyi kuba nosizi ngawe, nam andiyi kuba namfesane, kuba ndiya kuzisa iindlela zakho phezu kwakho.” (Hezekile 7:3, 4) Ngoko xa abantu bendele kwikhondo labo, uYehova ubagweba ngokuvisisana noko. Kodwa umgwebo wakhe usekelwa kubungqina obuqinileyo. Ngenxa yoko, xa “isikhalo sokumangalelwa” kweSodom neGomora safikayo ezindlebeni zakhe, uYehova wathi: “Ndizimisele kunene ukuhla ukuze ndibone enoba benza ngokupheleleyo kusini na ngokwesikhalo esifikileyo kum, kuze kuthi, ukuba akunjalo, ndikwazi oko.” (Genesis 18:20, 21) Hayi indlela esinokuba nombulelo ngayo kuba uYehova engafani nabantu abaninzi abakhawuleza benze izigqibo ngaphambi kokuva zonke izibakala! Eneneni, uYehova unjengokuba iBhayibhile imchaza ngokuthi, ‘nguThixo wentembeko, zonke iindlela zakhe zisesikweni.’—Duteronomi 32:4.
Yiba Nentembelo Ekubeni Sesikweni KukaYehova
19. Yintoni esinokuyenza ukuba sinemibuzo edidayo ngokuphathelele ukubonisa kukaYehova okusesikweni?
19 IBhayibhile ayichazi zonke iinkcukacha ngokuphathelele izenzo zikaYehova zexesha elidluleyo; yaye ayichazi zonke iinkcukacha ngendlela uYehova aza kuwuphumeza ngayo umgwebo ebantwini kwixesha elizayo. Xa sididwa ziingxelo okanye iziprofeto zeBhayibhile ezingenazo ezi nkcukacha, sinokubonisa ukunyaniseka okufanayo nokomprofeti uMika, owabhala wathi: “Ndiza kubonisa isimo sengqondo sokulindela kuThixo wosindiso lwam.”—Mika 7:7.
20, 21. Kutheni sinokuba nentembelo yokuba uYehova uya kusoloko esenza oko kulungileyo?
20 Sinokuba nentembelo yokuba kwimeko nganye, uYehova uya kwenza oko kulungileyo. Kwanaxa okungekho sikweni kutyeshelwa ngabantu, uYehova uyathembisa: “Impindezelo yeyam; kuya kubuyekeza mna.” (Roma 12:19) Ukuba sibonisa isimo sengqondo sokulinda, siya kubonisa intembelo efanayo naleyo yavakaliswa ngumpostile uPawulos owathi: “Ngaba kukho okungekho sikweni kuThixo? Nakanye!”—Roma 9:14.
21 Okwangoku, siphila ‘kumaxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo.’ (2 Timoti 3:1) Okungekho sikweni kunye ‘nezenzo zengcinezelo’ ziye zabangela ukusetyenziswa kakubi kwegunya ngenkohlakalo. (INtshumayeli 4:1) Kodwa ke, uYehova yena akatshintshanga. Usakuthiyile okungekho sikweni, yaye unenkxalabo enkulu ngabo bangamaxhoba ako. Ukuba sihlala sinyanisekile kuYehova nakulongamo lwakhe, uya kusinika amandla okunyamezela de akuphelise konke okungekho sikweni phantsi kolawulo loBukumkani bakhe.—1 Petros 5:6, 7.
^ isiqe. 13 UYehova wathi ngoYobhi: “Akukho bani unjengaye emhlabeni.” (Yobhi 1:8) Ngoko, kusenokwenzeka ukuba uYobhi wayephila emva kokufa kukaYosefu nangaphambi kokuba uMoses amiselwe njengenkokeli kaSirayeli. Ngenxa yoko, ngelo xesha kwakunokuthiwa akukho bani wayegcine ingqibelelo njengoYobhi.
Duteronomi 10:17-19 Kutheni sinokuba nentembelo yokuba uYehova akanamkhethe ekuqhubaneni kwakhe nathi?
Yobhi 34:1-12 Xa ujamelene nokungekho sikweni, amazwi kaElihu anokuyomeleza njani intembelo yakho kubulungisa bukaThixo?
INdumiso 1:1-6 Kutheni kukhuthaza nje ukwazi ukuba uYehova uzihlolisisa ngenyameko izenzo zabalungileyo nabangendawo?
Malaki 2:13-16 Wavakalelwa njani uYehova ngokungekho sikweni okwenziwa ngamadoda aqhawula umtshato nabafazi bawo ngaphandle kwezizathu ezifanelekileyo?
Ngaba UThixo Wayekhohlakele Xa Wayegweba Abantu Mandulo?
Ukuze siphendule lo mbuzo, qwalasela le mizekelo mibini yemigwebo kaThixo kuthethwa ngayo eBhayibhileni—uNogumbe womhla kaNowa kunye nokutshatyalaliswa kwamaKanan..